निर्वाचन आयुक्त र मन्त्रीको नाममा यौनधन्दा ! – YesKathmandu.com
निर्वाचन आयुक्त र मन्त्रीको नाममा यौनधन्दा !
बुधबार १८, चैत २०७१
काठमाडौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीको नाम बेच्दै वर्षौंदेखि राजधानीको मुटुमा कोठी चलाउने युवतीसँगै धन्दावाल किशोरीहरु रङ्गेहात फेला पर्छन् । तर, तिनले सञ्चालिकामाथि दोष नदेखाउँदा प्रहरी मानव बेचबिखनमा मुद्दा चलाउन सक्दैन । र, सार्वजनिक अपराध ऐनमा यस किसिमका काम–कारवाही सिमित हुन्छन् ।
कमजोर कानुनी प्रावधानको फाइदा उठाएर नेपालमा यस किसिमका थुप्रै धन्दावालले उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । शनिबार दिउँसो बानेश्वरको शान्तिनगर गेटछेऊ एउटा घरै भाडामा लिएर अखडा चलाउँदै आएकी झापा, घैलाडुब्बा निवासी पार्वता उप्रेती पक्राउ परिन् । साथमा थिए, आफूलाई एमाले युवा संघको कार्यकर्ता बताउने, नयाँदिल्लीस्थित प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरु युनिभर्सिटीमा प्रशिक्षित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सञ्जिव रोक्का । विश्व बैंकको लगानीमा सञ्चालित केही एनजिओमा समेत संलग्न इन्द्रपुर–४, मोरङका स्थायी बासिन्दा रोक्का विगत पाँच वर्षदेखि पार्वताको ग्राहक रहेछन् । प्रहरीले पक्रँदा उनी बुटवलकी १७ वर्षीया किशोरी आइषा केसीसँग थिए । त्यहीँबाट झापा, काकडभिट्टाकी गीता र ओखलढुंगाका राधिका खड्का पनि समातिए । प्रहरीलाई दच्काउन पार्वताले आफू नीलकण्ठ उप्रेतीको भतिजी हो भनिन् । सञ्जिवले उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतसँग निकटताको नाता देखाए । तर, प्रहरीले यी सबैलाई सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत म्याद थपी हिरासतमा राखेको छ । केही देहव्यापारी युवतीले साडीको फल्स देखाइदिन दिदीकहाँ आएकाले आफूलाई धेरै कुरा थाहा नभएको बताएको हुँदा पैसाको कारोबार गरेर देहव्यापार गरेको अभियोगमा उनीहरुलाई कडा मुद्दा लगाउन नसकिएको प्रहरीले बताएको छ ।
पत्नीले खोज्दा अमेरिकी प्रमाण ?
एमालेमा फर्कें तर गुट छान्न सकिनँ
One thought on “निर्वाचन आयुक्त र मन्त्रीको नाममा यौनधन्दा !”
स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेको अर्थसतक, कहाँ कहाँ जित्यो एमाले ?
चीनियाँ राष्ट्रपतिले भनेः नेपालको ध्यान आर्थिक मुद्धामा केन्द्रित हुनु पर्छ
ताप्लेजुङको सदरमुकाममा भिषण आगलागी
मङ्गलबारदेखि संसदमा संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्ने
धार्मिक पर्यटक वृद्धि गर्न पशुपतिमा संकीर्तन हुने
भारतीय प्रधानमन्त्री मुखर्जीलाई सिसिटिभीको निगरानीमा राखिने
राजेश हमाल भन्छन : ओलीले हारेर पनि जीते
भारत भ्रमण अत्यन्त सफल भयो ः उपप्रधानमन्त्री निधि
नेपाली कामदार ठग्ने अबैध संस्थाको रकममा प्रभु साह अष्ट्रेलिया भ्रमणमा
६ सय ९७ रेडियोलाई सञ्चालन अनुमति
स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रेस संयोजकमा जीवन भण्डारी नियुक्त